“Real Madrid way i sugi doontaa” – Kylian Mbappé – Gool FM
“Real Madrid way i sugi doontaa” – Kylian Mbappé
Dajiye November 3, 2019
(Paris) 03 Okt 2019. Madaxweyne ku xigeenkii hore kooxda Monaco ee Vadim Vasilyev ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wadahadal dhex maray isaga iyo Kylian Mbappé ka hor inta uusan ku biirin naadiga Paris Saint-Germain xagaagii 2017-kii.
Paris St Germain ayaa labo sano iyo bar kahor waxay kaga qaadatay kooxda Monaco heshiis hal xilli ciyaareed oo qaab amaah ah, iyadoo xagaagii 2018 ay bixisay qiimo dhan 180 milyan euro, si ay heshiiska kaga dhigto mid joogta ah, wuxuuna qalinka ku duugay qandaraas shan sano ah.
Kylian Mbappé ayaa xilligaas wuxuu xiiso aad u xooggan kaga imaanayay kooxda reer Spain ee Real Madrid, laakiin Los Blancos waxay diiday in qiimo intaas gaarsiisan ay ka bixiso xiddig da’adiisu ay tahay kaliya 18-jir.
Mbappé ayaa sidoo kale go’aansaday in da’da uu jiro marka loo fiiriyo uu iska sii joogo dalkiisa hooyo ee Faransiiska, ka hor inta uusan qaadin tallaabo weyn ee ku aaddan mustaqbalkiisa.
Haddaba Madaxweyne ku xigeynkii hore kooxda Monaco ee Vadim Vasilyev ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu shaaca kaga qaaday:
“Mbappé wuuxu igu yiri xilligaas: Vadim, waxaan dareemayaa inay wali tahay xilli hore, marka loo fiiriyo u dhaqaaqista kooxda Real Madrid, waxaan ku ciyaaray hal xilli ciyaareed oo kaliya dalkeyga”.
“Ma doonayo inaan dalkayga kaga dhaqaaqo sidaan oo kale, waxaan doonayaa inaan halkaan ku noqdo ciyaaryahan weyn, Real Madrid way i sugi doontaa, taasi waa sida aan dareemayo” ayuu sheegay Madaxweynaha Kooxda Monaco ee Vadim Vasilyev.
Kooxda AC Milan oo doonaysa inay bisha Janaayo soo qaadato labo xiddig ka tirsan Real Madrid
Xiddig muhiim u ah macallin Pep Guardiola oo dhaawac ku seegaya kulanka adag ee dhexmari doona Kooxaha Man City iyo Liverpool